Iindaba- iMankeel electric surfboard W7 yaziswa ngokusesikweni ngexesha lokuthengisa lasehlotyeni lika-2022
Njengenkampani entsha yetekhnoloji, ngokusekwe kumava aqokelelweyo kushishino lwesithuthuthu sombane, siye sayila saza saphuhlisa enye ibhodi yombane edadayo kulo nyaka uphelileyo ezisa ulonwabo ngakumbi ebantwini ---- I-Mankeel Electric Surfboard W7.
I-Mankeel W7 ithatha uyilo olutsha oludibeneyo, ukukhanya kunye nenkangeleko encinci, indawo egudileyo ehambelana nomphezulu wamanzi, yenza ukuba ihambe kakuhle emanzini, kwaye ikulungele ukuthwala, ubunzulu bokuntywila bufikelela kwi-50m, kukuvumela ukuba ukonwabele ngokupheleleyo iintlobo ezahlukeneyo. indawo ephantsi kwamanzi.Ukuhamba ngesikhephe kwihlabathi lamanzi nokuba awuyondadi elungileyo.
Ubomi bebhetri obude emva kwentlawulo epheleleyo ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-60, kwaye uyilo lwebhetri lwe-IP68 olungenamanzi ngokupheleleyo lukwakulungele ukubuyisela ibhetri okanye ukuyitshaja kwakhona.
Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ubukele amaxesha okonwabisa amanzi e-W7 ngakumbi
Le vidiyo yingxelo yovavanyo lwevidiyo engaphantsi kwamanzi ngomnye wabathengi bethu baseRussia.Umthengi wethu wenze into entsha esekwe kumbala wokuqala kwaye wayidaya ibhodi edadayo ibe ngumbala opholileyo wamanzi.ukuba unolunye uyilo lombala wenkangeleko, thina, njengefektri yobuchwephesha, singakwenzela yona.
Ibhetshi yokuqala yeemveliso ezintsha zale bhodi yokutyibiliza yombane kungekudala iza kugqitywa ngokusemthethweni kwaye iya kukhutshwa ukuze ithengiswe, ukulungiselela ukuthengiswa ehlotyeni lonyaka ozayo ka-2022. Ubuninzi bethu bangoku bokuvelisa ibhetshi yokuqala ziiyunithi ezingama-300 kuphela.Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukwenza iodolo.